Tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix. - Iphone
amboary ny mikrô amin'ny iphone 6
masoivoho asa any miami
mety misy karatra sim ratsy tsy miteraka serivisy
dia iphone x iphone 10
Manandrana mampiasa Safari amin'ny iPhoneo ianao, saingy tsy mifandray amin'ny Internet izany. Na inona na inona ataonao dia tsy afaka mijery Internet ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava izahay ny fomba hamaritana sy hamahana ny olana rehefa tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone-nao !
Milaza ve ny iPhone fa 'Tsy misy fifandraisana Internet'?
Indraindray ny iPhoneo dia hilaza fa mifamatotra amin'ny Wi-Fi izy io, fa misy hafatra 'Tsy misy fifandraisana Internet' miseho eto ambany ny anaran'ny tambajotrao. Raha mizaka an'io olana io ny iPhone dia azonao atao ny miala amin'ny fizarana olana momba ny data momba ny sela amin'ny olana amin'ity lahatsoratra ity, satria tsy misy dikany ireo dingana ireo.
Antony iray mahazatra hisehoan'ity fampandrenesana ity satria lavitra loatra ny iPhone-n'ny router-nao Wi-Fi ka mampiorina fifandraisana matanjaka. Andramo alefa manakaiky ny router Wi-Fi ny iPhone-nao ary jereo raha nanjavona ilay hafatra.
Raha maharitra izy io, dia ataovy izay hamerenanao ny iPhone, araho ny dingana ao amin'ny fizahana olana momba ny Wi-Fi, ary fenoy ireo dingana mandroso kokoa etsy ambany.
Ny zavatra voalohany hanandramana rehefa tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone dia famerenana tsotra fotsiny. Ny famonoana ny iPhone sy ny fiverenanao dia mamela ny programa rehetra hanakatona sy hamerina amin'ny fomba voajanahary, mety hamahana olana rindrambaiko madinidinika.
paoma tsy hiaraka amin'ny iphone
Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pisehoan'ny 'slide to power off'. Raha manana iPhone tsy misy bokotra Home ianao dia tsindrio miaraka ary tazomy ny bokotra an-daniny sy ny bokotra volume. Swipe ny sary mena sy fotsy avy any ankavia miankavanana hanidy ny iPhone.
Andraso segondra vitsy, avy eo avereno indray ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fihazonana ny bokotra herinaratra na ny bokotra eo amin'ny sisiny mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery.
Data data finday Wi-Fi
Azonao atao ny mampifandray ny iPhone amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na angona finday. Voalohany, hasehonay anao ny fomba hamaritana sy hamahana ny olan'ny Wi-Fi, avy eo dia hanao toy izany koa izahay amin'ireo olan'ny data.
Famahana ny olan'ny Wi-Fi
Vonoy ny Wi-Fi anao dia miverina
Ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone dia ny famonoana haingana ny Wi-Fi ary miverina. Manome fotoana faharoa an'ny iPhone hifandraisanao amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao izany, izay mety hamaha ny olan'ny rindrambaiko madinidinika.
Misokatra Fikirana ary tap Wifi . Avy eo, tap ny mifamadika eo akaikin'ny Wi-Fi eo an-tampon'ny menio. Andraso segondra vitsy, avy eo ahodino Wi-Fi indray.
Adinoy ny tambajotra Wi-Fi amin'ny iPhone-nao
Indraindray ny fanadino ny tamba-jotra Wi-Fi amin'ny iPhone-nao sy ny fametrahana azy toa ny vaovao dia afaka manamboatra olana amin'ny fifandraisana. Rehefa mampifandray ny iPhone amin'ny tamba-jotra Wi-Fi voalohany ianao dia mamonjy vaovao momba izany tambajotra izany ary ny fomba fampifandraisana azy . Raha niova ny ampahany amin'ilay fizotran'ny fifandraisana, dia mety ho ny antony tsy hifandraisan'ny iPhone amin'ny Internet, na ny antony ilazan'ny iPhone hoe 'Tsy misy fifandraisana Internet.'
Hamarino tsara fa manorata ny tenimiafinao Wi-Fi alohan'ny hamenoanao ity dingana ity! Tsy maintsy miditra indray ianao rehefa mifandray amin'ny tambajotra.
Sokafy ny fikirana ary kitiho ny Wi-Fi. Tsindrio ny bokotra fampahalalana eo akaikin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao, avy eo paompy Adinoy ity tambajotra ity .
Manaraka, miverena amin'ny Fikirana -> Wi-Fi ary kitiho ny tamba-jotra Wi-Fi anao hifandray aminy indray.
Atsaharo ny router
Indraindray tsy mandeha ny internet noho ny olana amin'ny router Wi-Fi anao, fa tsy ny iPhone-nao. Mety mila mamerina ny router ianao.
Voalohany, esory amin'ny rindrina ny router. Andraso segondra vitsy dia ampidiro indray izy io. Hiverina miverina ny router ny router ary manomboka mifandray indray. Miomàna fa mety maharitra fotoana kely izany!
Famahana ny olan'ny data sela
Vonoy ny cellular ary avereno
Ny famonoana ny angon-drakitra finday sy ny fiverenany indraindray dia afaka manamboatra olana kely amin'ny fifandraisana. Misokatra Fikirana ary tap finday . Avy eo, vonoy eo akaikiny ny switch Data momba ny sela . Andraso segondra vitsy, ary avereno indray.
Esory ary ampidiro indray ny karatra SIM-nao
ny Karatra SIM no mampifandray ny iPhone amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby amin'ny carrier anao. Indraindray ny fandroahana ny karatra SIM sy ny famerenany azy io dia afaka manamboatra ny olan'ny fifandraisana.
Ny karatra SIM iPhone dia mijanona ao anaty lovia eo akaikin'ny iPhone-nao. Zahao ny anay torolàlana momba ny fandroahana karatra SIM raha mila fanampiana ianao! Aorian'ny fampidirana ny karatra SIM anao, manandrama mampifandray amin'ny Internet.
Raha mbola tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone aorian'ny fanarahana ireo dingana etsy ambony, dia mety mila manamboatra famerenana lalindalina kokoa amin'ny iPhone ianao. Alohan'ny anaovanao dia mitodiha any Fikirana -> Ankapobeny -> Fanavaozana ny lozisialy ary alao antoka fa mihazakazaka ny iPhone farany ny iOS farany. paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana rindrambaiko misy.
Mamoaka tsy tapaka ny fanavaozana ny iOS i Apple mba hanamboarana bibikely sy olana madinidinika, ny iray amin'izany dia mety hanakana ny iPhone tsy hifandray amin'ny Internet.
tribedoce dx inona izany
Avereno ny fametrahana ny tambajotra
Rehefa mamerina ny toe-javatra misy ny tamba-jotra ianao, ny Wi-Fi rehetra, Bluetooth, Cellular ary VPN dia haverina amin'ny laoniny ny orinasa. Mila mifandray indray ireo fitaovana Bluetooth anao ary mampiditra ny teny miafinao Wi-Fi aorian'ny nahavitanao ity dingana ity.
Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Reset -> Avereno ny toe-javatra Network . Avy eo, tap Avereno ny fametrahana ny tambajotra rehefa miseho ny pop-up fanamafisana. Hikatona ny iPhone-nao, hanao ny reset, avy eo hivadika ho azy indray.
Ny famerenana amin'ny laoniny DFU (Device Firmware Update) no famerenana amin'ny laoniny lalina indrindra azonao atao amin'ny iPhone-nao. Alohan'ny hametrahana ny iPhone amin'ny maody DFU dia tianao izany tohàny hialana amin'ny fahaverezan'ny datao rehetra, toy ny mpifandray sy ny sarinao. Rehefa vonona ianao dia zahao ny lahatsoratray raha hianatra Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone anao .
Safidy fanamboarana sy fanohanana
Raha tsy misy ny dingana famahana olana momba ny rindrambaiko mamaha ny olana dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny solontenan'ny mpanjifa ao amin'ny Apple, ny mpampita tariby anao, na ny mpanamboatra ny router.
Mifandraisa amin'i Apple
Manoro hevitra izahay manantona ny fanohanan'ny Apple aloha hahitana raha afaka manampy anao manamboatra ny iPhone-nao izy ireo. Apple dia manome fanampiana an-tserasera, an-tariby, ary an-trano. Raha mikasa ny hiditra amin'ny Apple Store eo an-toerana ianao dia manamboara fotoana hifanarahana hahazoana antoka fa misy Apple Tech raha vantany vao tonga ianao.
Raha manana olana amin'ny findainao ny iPhone dia mety ilaina ny mampiasa vola amin'ny telefaona vaovao fa tsy mandoa vola mba hamboaranao ilay taloha. Zahao ny Fampitahana finday UpPhone hahitana ny vidiny tsara indrindra amin'ny telefaona vaovao avy amin'ny Apple, Samsung, Google, sns.
Mifandraisa amin'ny mpitatitra tsy misy tariby
Mifandraisa amin'ny mpampita tsy misy tariby anao raha manana olana amin'ny fampiasana angona findainao ianao, na raha mieritreritra ianao fa mety misy olana amin'ny drafitry ny findainao. Azonao atao ny mahita haingana ny laharan'ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny findainao amin'ny alàlan'ny Googling ny anarany sy ny 'fanohanan'ny mpanjifa.'
Raha tofoka amin'ny olana momba ny angon-drakitra finday ianao, dia mety ho tonga ny fotoana hiovana mpitatitra. Zahao UpPhone's fitaovana fampitahana drafitra finday mahita drafitra tsaratsara kokoa!
Mifandraisa amin'ny mpanamboatra ny router
Raha tsy afaka mifandray amin'ny Wi-Fi amin'ny fitaovanao ianao dia mifandraisa amin'ny mpanamboatra ny router. Mety hisy ny olana amin'ny router. Zahao ny lahatsoratray hafa raha te hahalala bebe kokoa torohevitra momba ny famahana olana amin'ny router , na Google ny anaran'ny mpanamboatra ny router sy ny 'fanohanan'ny mpanjifa' hahitanao ny nomeraon-telefaona mety.
Mifandray amin'ny Internet!
Namboarinao ny olana ary mifandray amin'ny Internet indray ny iPhone-nao. Hamarino tsara fa hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy hampianarana ny namanao, ny fianakavianao ary ny mpanaraka anao ny zavatra tokony hatao rehefa tsy hifandray amin'ny Internet ny iPhone. Raha manana fanontaniana hafa momba ny drafitra iPhone na findainao ianao dia avelao ny fanehoan-kevitra eto ambany!